I-Paddle Inn (indlwana 2)
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNatalia + Dave
I-White Lake Cabins yindawo encinci yokuchithela iiholide entliziyweni yeShuswap, eBritish Columbia, kwindawo efihlakeleyo yechibi. Sikholelwa ukuba ubomi kufuneka bube yibhalansi yokulula kunye nokuchukumisa i-adventure. Njengoko ubomi bethu busiya buxakeke, ubugcisa bokwenyani bokulinganisa kukuqhawula ukunxibelelana ngokwenene. Sikhuthaza iindwendwe zethu ukuba zithathe ngaphandle okukhulu apha ngomxube ogqibeleleyo wehlathi kunye nechibi. Ihlathi lisenokungabi nayo i-wifi kodwa apha eWhite Lake Cabins, sikuthembisa ngonxibelelwano olungcono.
Le khabhathi yi-576 sq ft enamagumbi okulala amabini kwaye inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale ngokugqibeleleyo. Ikhitshi enkulu enefriji, isitovu kunye nemicrowave. Ikwanayo negumbi lokuhlambela elibanzi, eliyilwe kakuhle elineshawa yokuma. Idesika yangaphandle inomgangatho odibeneyo wekhonkrithi kunye ne-10 'overhang ukukukhusela elangeni nasemvuleni ngelixa usitya i-fresco okanye udlala umdlalo webhodi kwipatio.
Ikhabhathi nganye inepatio yayo yabucala, ibbq yabucala, kunye nomgodi womlilo wabucala.
Njengoko siyindawo yokuphumla egxile ekubalekeni, sivumela kuphela iindwendwe ezibhalisiweyo kwipropati nakwiikhabhini.
IPaddle Inn inebhafu yabucala eshushu. Nceda uqaphele: i-tub eshushu ifumaneka kuphela kwiinyanga zethu zasebusika, ngo-Oktobha 1 - ngo-Ephreli 30. Kwiinyanga zasehlobo, i-tub eshushu ifumaneka ngesicelo kwintlawulo eyongezelelweyo ye-$ 50 kwaye kufuneka ifakwe kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
I-White Lake luluntu oluncinci olune-vibe elele kakhulu. Isondele ngokwaneleyo kwiSalmon Arm ukufumana zonke izinto zakho eziyimfuneko kodwa ukude ngokwaneleyo ukuba uzive ngathi usekhefini.
Umbuki zindwendwe ngu- Natalia + Dave
Sisoloko sikwisiza, nokuba kukunkcenkceshela igadi yethu kunye nezityalo ukuze sidlale elwandle. Sinabantwana abathathu abancinci abangaphantsi kweminyaka eyi-6 ubudala abathanda ukunceda ngokucoca i-cabin kunye nokujonga ukungena!
UNatalia + Dave yi-Superhost